Iminyaka eli-10 ifota ezona layibrari zintle emhlabeni | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Lo mfoti wafota elona layibrari intle ehlabathini
Kule mihla xa iindaba zigcwele iziganeko, ezemidlalo kunye nezopolitiko, kunye nezinye iindaba zamanye amazwe, inkcubeko ibonakala ngathi ibashiye ukuba bahlale ngasemva, xa kubaluleke kakhulu ukwakha iingcinga, imikhwa kunye nobuntu.
Kufuneka sibuyele kwelinye ijelo leendaba ukuze sifumane umfoti owayenombono oqaqambileyo thatha ezona layibrari zintle kwiifoto zakho kuzo zonke iplanethi. Ezo ndawo apho unokufunda ngokungenasiphelo de ube ulawula ukuphakamisa ulwazi lwakho kumanqanaba angenakufikeleleka ngala mhla wokuqala xa uthathe incwadi ngesandla sakho.
Umfoti UReinhard Görner usebenze kwicandelo loyilo ukusukela ngo-1982, kokubini kuyilo lwanamhlanje kunye nolwakhiwo lwembali. Kwakukho ngela xesha xa wayesenza iiklasi zokufota eyunivesithi, xa wayeqala ukuba nomdla kukufotwa kwazo zonke iintlobo zokwakha.
Kwakunjalo xa wayephambi kokuba uJulius Shulman afunde loo nto Inkuthazo yeza kuye kunye nencwadi yakhe ye-Architectural Photography. Sekuyiminyaka engaphezulu kwama-40 athe wazenzela igama kulo msebenzi, ebonisa umsebenzi wakhe kwimiboniso eyahlukeneyo kunye nazo zonke iintlobo zosasazo.
Kuluhlu awayedla ngokusebenzela kulo bonisa ubunzima kunye nobuhle bobugcisa obukhoyo kwiiphothifoliyo Unayo kumathala eencwadi kwaye oko kwaqala ngo-2008. Uthatha ikhamera yakhe ukuyibamba loo mimandla yemfundo apho anakho ukubonisa iintlobo ngeentlobo zezitayile zangaphakathi nganye nganye yazo.
Iyonke ifote ngaphezulu kwamathala eencwadi angama-50 abonisa ulingano macala ukuba inokuqokelela kwaye yintoni intywenka yeminye yabo ngezo shelufu ziphakama phantse zingapheli ngaphambi kokujonga komntu ofuna ukufundwa ngokutsha; njengoko kusenzeka ngalo mculi ofuna okufanayo, nangona ukusuka eqingqiweyo iziqwenga izacholo.
Apha iwebhusayithi yakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » Lo mfoti wafota elona layibrari intle ehlabathini